Bogga Ciyaaraha, 01 September 2018
Liverpool iyo Chelsea oo marki 4-aad Badiyay
Kooxda Liverpool ayaa galabta soo xareysay guusheedii afraad oo xiriir ah oo ay ka gaartay horyaalka Premier League Ingiriiska xilli ciyaareedkan cusub, kadib marki ay 2-1 ugu awood sheegatay Leicester City.
Milan oo Garaacday Roma
Kooxda AC Milan ayaa guusheedi ugu horreysay ka gaartay xilli ciyaareedka cusub ee horyaalka Talyaaniga, kadib marki ay xalay 2-1 uga badisay kooxda AS Roma.
Xiriirka kubadda cagta Yurub ayaa maanta soo saaray isku-aadka tartanka Europa League oo ah tartanka labaad ee ugu xiisaha badan dhinaca kubadda cagta Yurub.
Isku aadka Champions Leauge oo la sameeyay
Waxaa maanta la sameeyay isku aadka koobka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions Leauge ee xilli ciyaareedka 2018/2019.
Goolkii Ronaldo oo Noqday Goolka Sanadka
Gool uu xilli ciyaareedki lasoo dhaafay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ka dhaliyay kooxda uu hadda u ciyaaro ee Juventus ayaa noqday goolki ugu qurxanaa sannadkaan 2018-ka.
Tottenham oo guuldraddo qadhaadh bidday Manchester Utd
Kooxda Manchester United ayaa xalay guuldarro qaraar kala kulantay ciyaar ka tirsaneyd horyaalka Premier League oo ay la dheeshay kooxda Tottenham Hotspur, kadib marki United looga badiyay 3-0.
Ronaldo oo iibsanaya kooxda Real Valladolid
Weeraryahani hore ee xulka Brazil Ronaldo ayaa la sheegay inuu ku guda jiro wadahadallo uu ku rabo inuu ku iibsado kooxda Real Valladolid ee dalka Spain.
Pique: Waanu soo Dhaweyneynaa Pogba
Laacibka difaaca uga ciyaara kooxda Barcelona Gerard Pique ayaa maanta sheegay in ay aad ugu soo dhaweyn doonaan garoonka Nou Camp haddii uu laacibka dalka France iyo kooxda Manchester United Paul Pogba uu doonayo inuu yimaado Barcelona.
Dhageyso Barnaamijka Ciyaaraya
Dhageyso Barnaamijka Ciyaaraha ee Isniinta, waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Maxamuud Mascadde.
Napoli oo garaacday Milan
Kooxda Napoli ayaa guul la yaab leh ka gaartay ciyaar ay xalay la dheeshay kooxda AC Milan, kadib marki ay ugu awood sheegatay 3-2.
Kooxda Bayern oo guul ku billowday horyaalka Jarmalka
Kooxda difaacaneysa horyaalnimada Jarmalka ee Bayern Munich ayaa guul ku billowday ciyaarteedii furitaanka horyaalka ee xilli ciyaareedka cusub 2018-19.
Coman oo todobaadyo maqnaanaya
Kooxda Bayern Munich ayaa sheegtay in laacibka garabka uga ciyaara ee la yiraahdo Kingsley Coman uu garoonnada ka maqnaan doono muddo todobaayo ah sababo la xiriira qalliin looga sameyn doono canqawga lugta.